Fotoana famakiana: 3 minitra Venice dia iray amin'ireo tena manome aingam-panahy sy mahagaga tanàna any Italia ary mora lamasinina. Amin'ny alalan'ny fitsidihana Venice nandritra ny fety Paska, dia afaka mankafy ny lohataona mahafinaritra Weather. Izany dia mamela anao mandany ny tontolo andro any an-tokotany. Mandehana mankany amin'ny foibe manan-tantara…
Fotoana famakiana: 4 minitra Jereo sy hiaina izany bebe kokoa amin'ny alalan'ny nirotsaka amin'ny fiaran-dalamby Eoropa traikefa nahafinaritra. Nandeha lamasinina any Eoropa no quintessential fomba noho ny nitsidika Eoropa, ary dia tsy zava-miafina ny antony. Mivoatra be ny tamba-jotra ka afaka mandresy firenena sy kolontsaina maro ny mpandeha…
Fotoana famakiana: 3 minitra Interrailing soso-kevitra ary nandeha tamin'ny teti-bola azo atao raha manomana tsara ny dianareo. Ny vidin'ny tapakilan'ny lamasinina, zavatra ilaina, sakafo, ary ny fialam-boly no miovaova eo amin'ny firenena any Eoropa, fa misy fomba maro hankafizana ny dia mora vidy. Soa ihany, miaraka amin'ny fiomanana, rail Tsidika…